Iyo Alexandria Quartet, hunyanzvi hwekuona manejimendi mune zvinyorwa | Zvazvino Zvinyorwa
Iyo Alexandria Quartet akateedzana enganonyorwa -Justine, Balthazar, mountolive y Clea- yakagadzirwa nemunyori weBritish Lawrence G. Durrell. Aivewo mudetembi ane mukurumbira, munyori wemitambo, munyori wemabhuku ekufamba uye nhoroondo dzeupenyu. Nepo iyi tetralogy rave iro basa rake rinogamuchirwa nekuda kwechinangwa chake che, senge Iyo Avignon Quintet, tsanangura hukama hwehunhu hwevanhu.
Neichi chikonzero, Durrell akagadzira gakava zvichibva pane zvakaitika kuboka reshamwari dzakagovana chikamu chehupenyu hwadzo hwezuva nezuva muguta reAlexandria, Egypt. (Pamberi uye mushure meChipiri World Cup). Zvakaenzana, nekutenda kune yakasarudzika nzira yekuburitsa imwe neimwe, mana maBhaibheri akasiyana anowanikwa, zvinopesana uye, panguva imwe chete, zvinowirirana yenyaya imwe chete.
1 Zvimwe chokwadi nezvemunyori
1.1 Mamwe emabasa ake anozivikanwa
2 Kuongorora kweiyo Alexandria Quartet
2.1 Chinangwa uye zvikamu zve tetralogy
2.1.1 Iyo yekutanga chirongwa
2.1.2 Intrinsic tsika
3.4.1 Clea uye nhaka ye tetralogy
Zvimwe chokwadi nezvemunyori
Mwanakomana wevatorwa vekuBritain, Lawrence George Durrell akaberekerwa muJalandar, India, muna Kukadzi 27, 1912. Achiri mudiki Akatumirwa kunodzidza kuEngland, shanduko iyo yaasina kumbobvumidza uye zvakakanganisa pesheni yavo yekugara kuyunivhesiti. Ipapo, mhinduro kumamiriro ezvinhu aya yaive yekuzvipira iye kunyora. Aya ndiwo mabudiro aakaita nhetembo yake yekutanga, Quaint Fragment (1931), yaive nekugamuchirwa kwepakati.
Muna 1938 yakabudiswa Bhuku dema, rondedzero yakatakurwa nendima dzenhoroondo dzakava budiriro yekutanga yemunyori weBritish. Ipapo mukati Cefalu (1948) - bhuku rake rekutanga- akaongorora kunetseka kwake kwakanyanya uye akaratidzira kutanga kwebasa rine mukurumbira mukati meiyo genre. Durrell akafira muSommières, France, musi waNovember 8, 1990.
Sero raProspero (1945)
Kufungisisa nezveVenus yegungwa (1955)
Marimu anorwadza (1957)
Iyo Avignon Quintet (1985)
Chiratidzo cheProvence (1989)
Analysis of Iyo Alexandria Quartet
Lawrence G. Durrell aida kutsanangura mukartart yake pfungwa yenguva-yenguva yakaburitswa naAlbert Einstein mune yake dzidziso yehukama pakutanga kwezana ramakore rechiXNUMX. Mumashoko emunyori iye, saga iyi -Izvi zvakamuratidza humunyori semunyori-- inofumura sepakati axis "kuferefetwa kwerudo rwemazuva ano."
Saizvozvowo, vaverengi uye vanyori vanoongorora vanoona chidimbu ichi se mumiriri wepamusoro wezviitiko zvakaitika muEjipitori Hondo Yenyika Yechipiri isati yatanga. Mupfungwa iyi, vhoriyamu yega yega yetetralogy inoratidza kuti iwo mavara akafanana akarongwa mumamiriro akafanana anogona kuyemurwa kubva pane zvakasiyana maonero uye kududzirwa zvakasiyana.
Chinangwa uye zvikamu zve tetralogy
Pasi pezvinangwa zvakataurwa mundima yapfuura, Durrell akagadzira akateedzana emabhuku mana anoumba huwandu hwenhoroondo. Matatu ekutanga, -Justine, Balthazar y mountolive- inomiririra iwo Euclidean zviyero zvepadenga. Naizvozvo, iyo nyaya inonyanya kutarisa kune imwechete nyaya, asi kubva kwakasiyana maonero.
Nechekare murugwaro rwechina, Clea, munyori akabatanidza chimiro chepasi. Nekudaro, kufambira mberi kwenyaya uye mhedzisiro yeetralogy zvaigona. Kunyangwe Durrell akatadza kuudza vaverengi vake nzwisiso iri nani yedzidziso dzaEinstein, inoita kunge inotsanangura mimwe mibvunzo nezve el amor zazvino.
Iyo yekutanga chirongwa
Nyanzvi dzezvidzidzo dzinowanzo simbisa chirevo chekuti Lawrence George Durrell akagadzira sei quartet. Sezvo chirongwa chekutanga chebasa renyanzvi yeBritish chaive chekumiririra dzidziso yesainzi… Pakupedzisira, zvakazove zvinoshamisa novel yakagamuchirwa senhaka kubva muzana ramakore rechiXNUMX uye ichikosheswa zvakanyanya kusvikira nhasi.
Durrell akashandisa boka reshamwari dziri munguva yepamberi peHondo Yenyika II kuwedzera pfungwa dzake. Panyaya iyi, munyori wenhau weBritish anoratidza kuderera kwa dkukosha kwechokwadi kwehukama pakati pevanhu vanokwanisa kuratidza hushamwari zvisinei nekusiyana kwavo.
Uyezve, vatsoropodzi vazhinji vakabvuma kurumbidza iri basa nekuda kwekumiririrwa kwakajeka kweguta rinotsanangurwa muhukuru hwesimba. Muchokwadi, iro guta guru rinoratidzika senge imwe hunhu. Mumashoko emunyori, "guta rakatishandisa sekunge tiri maruva aro, iro rakatipinza mumakakatanwa aive aro uye takatenda zvisirizvo zvedu, anodiwa Alexandria."
Chikamu chekutanga chinoitika mune inoshamisa (asi yakashata) Alexandria yema1930. Apa munyori anotsanangura nyaya yerudo pakati peanonzwisisika uye anonyengedza Justine naDarley, murondedzeri wenyaya.. Wekupedzisira anowanikwa pakutanga kwenyaya pachiwi chega cheGreek achiperekedzwa naMelissa, musikana ane makore maviri, mwanasikana weaimbova mudiwa wake.
Ikoko - mune imwe nzira yekudzokera - ndangariro dzekugara kwake muAlexandria pamwe nedzimwe nhengo dzenyaya dzinomutsa. Izvo ndezve Balthazar, Nessim naMountolive, vane nyaya dzakapindirana muhukama hwakanyanya hwerudo, hushamwari nekutengesa. Nenzira imwecheteyo, Kubudikidza nekucherechedzwa kweaya mavara, hunyanzvi uye mararamiro eguta iro reAfrica zvinoonekwa.
Justine: Quartet ye ...
Mubhuku repiri resaga, chokwadi uye nguva yakatarwa yakafanana neya Justine. Musiyano chete ndewekuti chokwadi chinoratidzwa kubva mumaonero aDr Balthazar, uyo anoona Justine semukadzi ari kuverenga, achitonhorera uye azere nechinangwa cherima. Saizvozvo, kwaari hukama pakati pake naDarley hunobva pachirongwa chinopesana nehunhu hwakanaka hwerudo.
Balthazar. Quartet ye ...
Muchikamu chechitatu, kumwe kuchinja kwemaonero kunoitika; inotarisana nemumiriri wechidiki wechiChirungu David Mountolive. Uyu munhu anogara hukama hunodakadza nemukadzi mukuru kwaari. Mukuwedzera, iye anobatanidzwa mune rangano yezvematongerwo enyika. Kumashure kwake ndiJustine naNessim, saka, nyaya yacho inotarisana nerudo uye hunyengeri hwemasimba ezvematongerwo enyika.
Mountolive. III quartet ...
Lawrence George Durrell akagumisa tetralogy yake padyo padyo nebasa risingakanganwike. Clea, inounza tsika kune saga nekurondedzera nzira uye mhedzisiro inotorwa nevanhu vese panopera hondo. Kune rimwe divi, Justine akasungirwa kumba kwake uye Mountolive anosiya Alexandria.
Pane kudaro, Darley anodzokera kuguta iro, kunyangwe nekuparadzwa kwehondo, risina kurasikirwa nerunako. Kune chikamu chayo, Clea, hunhu, anomirira Darley paanosvika mudhorobha asina fungidziro pamusoro pake kana zviitiko zvichauya. Pakupedzisira, vese vanoshamiswa nerudo.
Clea: IV. Quartet ye ...
Clea uye nhaka ye tetralogy
Mune dzakawanda zvinyorwa zvekuongorora uye kuongorora, Clea Izvo zvinonongedzerwa kwazviri sekushongedzwa korona yenhoroondo iyo kushanda kwayo kusingaori. Saizvozvo, iri bhuku inobvumira kunzwisiswa kwakajeka kwechirongwa chose chakagadziriswa muzvikamu zvakapfuura. Nechikonzero ichi, chikamu chazvino chinofungidzirwa nevatsoropodzi senge iwo magwaro akapedzisira achinja quartet kuita yechokwadi yehunyanzvi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Iyo Alexandria Quartet